IAlfa-lactalbumin (9013-90-5) Abavelisi-uPcoker
I-Lactalbumin, ekwabizwa ngokuba yi- "whey protein", yi-albhamuin equlethwe kubisi kwaye ifunyenwe kwi-Whey. I-Lactalbumin ifunyanwa… ..
Ividiyo yeAlfa-lactalbumin (9013-90-5) ividiyo
I-al-Lactalbumin powder Suqobo
Igama lemveliso Ialfa-lactalbumin (9013-90-5)
i-lactalbumin, i-alpha-; i-alpha-lactalbumin; I-LYZL7; iprosesa ye-lysozyme-7 I-lactose synthase B protein;
Iqela leziyobisi I-Biochemicals kunye neeRegents, iCasein kunye nezinye iiProtein zobisi, Iiprotein kunye neDerivatives
Inani leCAS 9013-90-5
I molecular WSibhozo 14178 Da
umbala Umhlophe ukuphuma kumpu omhlophe
Aukuguquka i-alpha lactalbumin powder uyisebenzisile ukutya, ukongeza, ukophula ubisi.
I-al-lactalbumin (9013-90-5) Isishwankathelo
I-lactalbumin, ekwabizwa ngokuba yi- "whey protein", yi-albhamuin equlethwe kubisi kwaye ifunyenwe kwi-Whey. I-lactalbumin ifumaneka kubisi lwebele ezininzi. Kukho ii-alpha kunye neebeta lactalbumins; Zombini ziqulathe ubisi.
Izifundo zesayensi zibonisa ukuba iintlobo ezithile ze-lactalbumin (iprotey ye-Whey) inokuphucula kakhulu ukuphendula komzimba kunye nokunyusa amanqanaba e-glutathione ngokwezilwanyana kwaye ine-antiviral (ngokuchasene neentsholongwane), anti-apoptotic (ukunqanda ukufa kweseli) kunye ne-anti-tumor (ngokuchasene nomhlaza okanye amathumba ) imisebenzi ebantwini.
IAlfa-lactalbumin yiprotey yendalo ene-Whey enendalo enomxholo ophakamileyo ngokwemvelo wazo zonke i-amino acid ezixabisekileyo kunye nee-amino acid (BCAA), ezenza umthombo okhethekileyo weproteyini. Eyona nto ibaluleke kakhulu ye-amino acid kwi-alpha-lactalbumin yi-tryptophan kunye ne-cysteine, kunye ne-BCAAs; I-leucine, isoleucine kunye neValine.
Ialfa-lactalbumin yiprotein efumaneka kwisixa sesibini esona siphezulu kwiiprotey ze-Whey ezikhethekileyo malunga ne-17%. Inazo zonke izibonelelo zeprotey ye-Whey; okt, ngumthombo opheleleyo weproteyini ephezulu kwii-EAA, utyebile kwii-amino acid acid (i-BCAAs), ine-digestibility ephezulu, kwaye i-lactose- kwaye ayinamafutha.
Luyilo olwahlukileyo lwe-amino acid elenza ukuba i-alpha-lactalbumin ibe yiprotein efanelekileyo kubantu abafuna izibonelelo ezahlukeneyo.
Ialfa-lactalbumin ityebile kubalulekile kwaye inemeko ye-amino acid efanelekileyo kwaye inemeko efanelekileyo kwaye yiprotein esebenzayo kubisi lomntu. Ilungele iindidi zezicelo zokondla zonyango njengeziselo ze-UHT, imivalo kunye neepowder.
IAlfa-lactalbumin ngowona mthombo utyebileyo we-amino acids tryptophan kunye cysteine. Kwezi zinto zimbini, i-cysteine ​​ibonakala njenge-amino acid ethintela umyinge we-glutathione (GSH) -i-antioxidant eyaziwa ukunciphisa uxinzelelo lwe-oxidative emzimbeni womntu.
‍I-al-lactalbumin ngokwemvelo iphezulu kwi-tryptophan
I-Tryptophan yenye yezona zinto zincinci ze-amino acid kwiiprotheni zokutya. Nangona kunjalo, i-alpha-lactalbumin ibonelela nge-48 mg ye-tryptophan ngegramu nganye, umxholo wayo uphezulu kuyo yonke imithombo yeprotheni yokutya.
I-Alpha-lactalbumin njengomthombo weproteyin yonyusa amanqanaba e-tryptophan, okhuthaza ukwakheka kunye nokufumaneka kwe-serotonin kwingqondo. Emva koko, i-serotonin ixhasa ukuveliswa kwe-melatonin, i-hormone enceda ukulawula iipateni zokulala.
Ialfa-lactalbumin iphezulu kwi-cysteine
I-al-lactalbumin ibonelela ngama-48 mg e-cysteine ​​kwigram nganye yeprotheyini. I-cysteine ​​ingumbanduleli ngqo kwi-antioxidant glutathione, ebandakanyeka kwiinkqubo zomzimba ezixhasa amajoni omzimba, ukwakha nokulungisa izicubu, kunye nokukhusela kumonakalo we-oxidative.
IAlfa-lactalbumin ngumthombo otyebileyo weSalfa-inama-amino acid
Iprotein ye-alpha-lactalbumin Whey inayo umlinganiso ohlukileyo we-5: 1 we-cysteine ​​kwi-methionine - umyinge owuthandayo ngokwasemzimbeni. I-Methionine isembindini womjikelezo we-methylation, yinkqubo ebaluleke kakhulu efuna ubumdaka, ivithamini B12, kunye ne-choline, kwaye ibalulekile ekuqulunqweni kwe-nucleotide, iibhlokhi zokwakha zeDNA.
Iproteni enamavili (kubandakanya i-alpha-lactalbumin) ngumthombo otyebileyo we-amino acid.
Iprotey enamavili iphezulu kwii-EAA, ii-amino acid ezingama-20 kufuneka zivela ekutyeni kuba umzimba awukwazi ukuzidibanisa. Ngapha koko, ii-BCAA, ngakumbi i-leucine, idlala indima ngqo ekuqaliseni ukumiliselwa kweprotein yomsipha.
Ii-EAA ziyaxhasa ukwakhiwa, ukulungiswa kunye nokudityaniswa kweeproteni zemisipha nokuba kukho iprotheyini ephantsi okanye intlahla yeekhalori.
Iprotein ye-alpha-lactalbumin Whey inayo iipeptidi ze-bioactive
Iipeptides ze-Biyoactive zinepropathi ye-prebiotic kwaye zinesicelo esikhethekileyo esisebenzayo sempilo yabantu. Uphando lubonisa iziphumo ezithile ze-alpha-lactalbumin ezingubeni ziyinxalenye evela kwii-peptides ze-bioactive ezivela kwi-tryptophan ekhethekileyo kunye nokudityaniswa kwe-cysteine ​​nolunye uhlengahlengiso lwamva lokuguqula ezi amino acid.
Njengomgunyathi, i-alpha-lactalbumin ibopha ngokuqinileyo i-calcium kunye ne-zinc ion kwaye inokuba nomsebenzi we-bactericidal okanye antitumor. Ukusongelwa: okwahluka kwe-alpha-lactalbumin, ebizwa ngokuba yiHAMLET, kusenokwenzeka ukuba kubangele ukuba apoptosis kwisisu kunye neeseli zokumitha.
I-al-lactalbumin ikho kwinqanaba le-0.02% ukuya kwi-0.03% kubisi lwe-bovine, yenza ikhethekileyo kunye nokucocwa kwesayensi echanekileyo. Ubukho bayo kubisi lomntu luphezulu kakhulu, malunga namaxesha asibhozo ngaphezulu; ke, ukwahlulwa kunye nokucocwa kwe-alpha-lactalbumin kwenza uphuhliso lwefomyula yosana ifane kakhulu nobisi lomntu.
I-Alpha-lactalbumin njengomthombo weproteyin yonyusa amanqanaba e-tryptophan, okhuthaza ukwakheka kunye nokufumaneka kwe-serotonin kwingqondo. Emva koko, i-serotonin ixhasa ukuveliswa kwe-melatonin, i-hormone enceda ukulawula iipateni zokulala. I-Serotonin ivelisa iziphumo ezininzi kwaye iyabandakanyeka kulawulo lwenkanuko, imvakalelo, ulawulo lokulala, ukusebenza kwengqondo kunye nokukwazi ukumelana noxinzelelo.
Kwisikhundla samva nje sokuma kweprotein yi-International Society of Sports Nutrition, i-alpha-lactalbumin ikwaphakanyiswa ngenxa yesikhundla sayo sokupholisa amanxeba ngokukhawuleza, okubalulekileyo ekubuyiseleni kwimfazwe kunye nokunxibelelana kwezemidlalo.
I-LALBA (i-Alpha-lactalbumin) inemisebenzi emininzi ye-biochemical, umzekelo, ukubopha i-calcium ion, umsebenzi we-lactose synthase. Eminye yemisebenzi ibambisene nezinye iiproteni, eminye imisebenzi inokusebenza yi-LALBA ngokwayo. Sikhethe eyona misebenzi ininzi i-LALBA, kwaye sidwelise ezinye iiproteni ezinemisebenzi efanayo ne-LALBA. Unokufumana uninzi lweeproteni kwindawo yethu.
I-alpha-lactalbumin Whey protein kufuneka ixhase iimbaleki okanye abantu abafuna ukugcina okanye ukwakha izihlunu zemisipha ngexesha leemeko zekatabolism, njengokuzila ebusuku, ukunciphisa umzimba, ukulala phantsi, ukuguga, ukuzivocavoca / uxinzelelo okanye ukugula.
Izifundo zibonakalise ukuba ukusebenzisa i-alpha-lactalbumin etyebileyo kwi-tryptophan kunokuphucula ukulala kunye nokuqaphela kwentsasa, ukusebenza kwengqondo phantsi koxinzelelo, kunye nemoxinzelelo phantsi koxinzelelo.
Ialfa-lactalbumin powder setyenziso
Ukusetyenziswa kwealfa-lactalbuminpowder njengenxalenye yeefomula zeentsana, ukuzenza zifane ngakumbi nobisi lwebele;
Ukusetyenziswa kwealfa-lactalbuminpowder njengesongezelelo ukukhuthaza impilo yesisu okanye ukuguqula umsebenzi we-neurological, kubandakanya ukulala noxinzelelo;
Ukusetyenziswa kwealfa-lactalbuminpowder njenge-arhente yonyango enezicelo kwiimeko okanye izifo ezinjenge-sarcopenia, ukuphazamiseka kwemvakalelo, ukubamba kunye nomhlaza.
Booij L, Merens W, Markus C, Van der Ngaba A. Ukutya okucebile kwi-alpha-lactalbumin kuphucula inkumbulo kwizigulana ezingafakwanga zilufumileyo zibuyise uxinzelelo kunye nolawulo oluhambelanayo. J Psychopharmacol 2006; 20 (4): 526-535.
UMarkus C, uOlivier B, de Haan E. Whey protein enobutyebi kwi-alpha-lactalbumin inyusa umyinge weplasma tryptophan ukuya kwisibalo sezinye ii-amino acid ezikhulu nezingasasebenziyo kunye nokuphucula ukusebenza kwengqondo kwizifundo ezinomngcipheko. NdinguJ Clin Nutr 2002; 75 (6): 1051-1056.
Imveliso ye-al-lactalbumin kwimoto yabantu i-carcinoma Science 1975 190: 673-.
Thelekisa ulungelelwaniso lwe-amino acid ye-bovine alpha-lactalbumin kunye ne-hens yeqanda elimhlophe lysozyme.K Brew et. Al Ijenali ye-chemistry yebhayoloji, i-242 (16), engacaciswanga (1967-8-25)
IAlfa-Lactalbumin Yandisa Iprotein yeWheyithi yokuGxila ekuPhuculeni i-Gut, immune and Development of Brain in Preterm Pigs. Nielsen CH, Hui Y, Nguyen DN, Ahnfeldt AM, Burrin DG, Hartmann B, Heckmann AB, Sangild PT, Thymann T, Bering SB. Izondlo. 2020 Jan 17
uphando kunye nokuthelekisa imisebenzi ye-anti-tumor ye-lactoferrin, α-lactalbumin, kunye ne-β-lactoglobulin kwi-A549, HT29, HepG2, kunye neemodeli ze-tumor ze-MDA231-LM2. Li HY, Li P, Yang HG, Wang YZ, Huang GX, Wang JQ, Zheng N. J Dairy Sci. Ngo-2019 Novemba